Mudaharaadayaal Gubay Xarunta Baarlamaanka Burkina Faso Ee Galbeedka Afrika | #1Araweelo News Network
Mudaharaadayaal Gubay Xarunta Baarlamaanka Burkina Faso Ee Galbeedka Afrika
Ouagadougou(ANN)Kumanaan qof oo cadhaysan ayaa isugu soo baxay caasimada Dalka Burkiina Faaso ee Galbeedka Afrika, kuwaas gebi ahaaba dab qabadsiiyay Dhismaha Xarunta Telefishnka ee dalkaa iyo dhismaha Baarlamanka ee caasimada Ouagadougo.
Dibadbaxayaasha, ayaa ka cadhooday. Kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in Madaxweynaha Dalka Burkina Faso Mr. Blaise Compaore oo doonaya in Dastuurka Dalka wax laga bedelo, taas oo u suurtagelinay in uu talada dalka dib usii haysto marka la gaadho doorashooyinka soo socda ee sanadka danbe.
Dadka gedoodsan, ayaa sidoo kale dab qabad siiyey dhismayaal ay dawladu leedahay oo ku yaal caasimada, waxaana goobaha kale ee la gubay ka mid ah Xarunta Xisbiga Talada dalka haya ee Madaxweyne Blaise Compaore iyo xarunta dowlada hoose ee caasimada.
Mr. Blaise Compaore, ayaa qorshayna in la xaliyo rabshadaha, wuxuuna kulamo la yeeshay hogaamiyaasha mucaaradka. Laakiin taasi waxba kama bedelin xaalada kacsan, waxaana diyaarado nooca Elekobtarta loo yaqaan oo xanbaarsan sunta dadka kaga ilmaysiisa iyo rasaasta loo adeegsado mudaharaadka hawada lagaga weeraray mudaharaadayaasha oo qorshayna in ay kusii fidaan magaalooyinka uu ka kooban yahay dalku.
Mr Campaore ayaa awooda dalkaasi afgembi kula wareegay sanadii 1987-dii, wuxuuna qabtay dhawr doorasho oo magac u yaal ahaa, kuwaas oo u suurta geliyay inuu sii haysto xukunka ilaa xiligan.